Getaways Europe - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuvakasha (Ikhasi 3)
INhlonhlo YaseJutland iyintamo enhle yomhlaba eyabiwe amazwe amabili. Ingxenye eyodwa eyesiJalimane kanti enye eyesiDanish. Inamathafa amahle kakhulu. IDenmark! Uyile? Yebo, inezindawo eziningi ezinhle kakhulu futhi ezinye ezinhle kakhulu zisenhlonhlweni yaseJutland.
I-Royal Monastery yaseSan Juan de la Peña
Uma iSpain igcwele okuthile, kungamasonto nezindela, akunjalo? E-Aragon sithola lena esiyibona esithombeni: iRoyal Monastery yaseSpain inezindela eziningi futhi enye yazo, ngenxa yendawo yayo, yiRoyal Monastery yaseSan Juan de la Peña.
Izigodlo ezinhle kakhulu eSpain
Yeka ukukhetha! Iqiniso ukuthi kunzima ukwenza uhlu lwezinqaba ezinhle kakhulu eSpain ... Ziningi kakhulu! Futhi yiziphi izindlela iSpain engaba nazo izinqaba eziningi ezinhle, kungenzeka yini ukwenza uhlu? Sizamile ngakho-ke bheka ukuthi uyawathanda yini wona lawa.
ISlovenia izwe elithola kancane kancane phakathi kwezindawo zezivakashi zaseYurophu. Muhle! Phakathi kwamadolobha alo asendulo kanye nelinye lamapharele abavakashi baseSlovenia kuneLake Bled. Kubukeka njengenganekwane! Isiqhingi, isonto elihle, inqaba yangenkathi ephakathi ...
Yini ongayibona kuTrujillo
ITrujillo yidolobha lase-Extremaduran elinomlando omuhle, ngakho-ke linezigodlo, amasonto kanye neMeya yePlaza ethakazelisayo.
IStrasbourg Cathedral ingenye yamagugu amahle kakhulu wobuciko bamaGoth eYurophu. Ukwakhiwa kwayo kwaqala ...
Yini ongayibona eSantillana del Mar
Idolobha laseSantillana del Mar linikeza izindawo eziningi eziheha izivakashi, nedolobha elihle elidala kanye ne-Altamira Caves edumile.
I-Oberammergau, idolobha lezinganekwane
Kunamadolobha amaningi eYurophu abonakala ngathi athathwe kulezo zinganekwane esizifunda sisengabantwana. IJalimane inezininingana kanti elinye lalo liyidolobha elincane. Uyawathanda amadolobhana ezinganekwane? Ngakho-ke lapho uhambela eJalimane vakashela i-Oberammergau, idolobha le-pastel ne-baroque.
Kunemigwaqo nezindlela, imizila esinqamula kumathafa amahle neminye esifaka emlandweni wezakhiwo nezenkolo. Imizila yokugcina yabavakashi eSpain yiCistercian Route: ihlanganisa inkolo, ubuciko kanye nomlando kumakhilomitha ambalwa.
Umuntu ubelokhu ethanda ukwakha phezulu futhi umhlaba ugcwele izakhiwo ezizama ukuklwebha isibhakabhaka noma ukufinyelela emafwini. In Uma uthatha uhambo oluya e-Italy, ungaphuthelwa uMbhoshongo WasePisa. Sñi, umbhoshongo odumile wokuncika. Isondele kakhulu kuFlorence.
Mad king castle
Njengakwamanye amazwe amaningi eYurophu, iJalimane izwe lezinqaba. Eningizimu yeBavaria sithola abathathu abadumile ...
IMallos de Riglos
Umhlaba unezindawo ezingajwayelekile, izindawo okubukeka sengathi ziqoshwe ngesandla esinekhono nesitayela somuntu ongaziwa. Yilokho okwenzeka eMallos de Uma uthanda ukukhuphuka noma ukukhuphuka izintaba bese uya eHuesca uyenze eMallos de Riglos emnandi. Amadwala akhuphuka, amile ngendlela exakile!
Yini ongayibona eWarsaw
IWarsaw iyinhloko-dolobha yasePoland futhi inomlando omningi ngemuva kwayo, kepha futhi inokunikeza kakhulu izivakashi.
Yini ongayibona eSalamanca
Idolobha laseSalamanca liyindawo ekahle yokubalekela ngempelasonto, indawo eyiGugu Lomhlaba futhi egcwele izikhumbuzo.
IYurophu igcwele amasonto nezindela futhi amanye amahle kakhulu aseSpain. Lokhu kwenzeka eMonastery yaseGuadalupe, enye yezindawo ezingamagugu omhlaba eSpain ise-Extremadura futhi iyiNdlu Yezindela enhle yaseGuadalupe. Ungaphuthelwa!
Yini ongayibona kuZamora
Thola konke ongakubona ngempelasonto edolobheni laseZamora, ngomzila wawo owaziwa kakhulu wamaRoma ogcwele amasonto.
Okufanele ukwenze eTenerife
Isiqhingi saseTenerife siyindawo yokuvakasha kakhulu futhi sinikeza konke kusuka olwandle kuya ezikhungweni ezinhle zomlando, amawa noma imigede yasendulo.
Thola amasiko athokozisayo aseGrisi ukuze ufunde kabanzi ngaleli zwe laseYurophu elithandekayo eliseduze neMedithera.
Amasiko aseJalimane asitshela okuningi ngempilo yabo nobuntu bamaJalimane, okuthile okubalulekile ukuhamba lapho.
Lapho silungiselela uhambo kunezinto eziningi okufanele sicabange ngazo ukuze konke kuhambe ...
Amasiko ase-Ireland acebile kakhulu futhi ahlukahlukene, ahlanganiswe kakhulu namasiko asendulo amaCelt asasaphila.
Jabulela i-gastronomy yasePortugal
I-gastronomy yesiPutukezi ifakiwe ekudleni kwaseMedithera futhi inikeza izitsha ezinempilo ezenziwe ngezithako ezahlukahlukene.
I-gastronomy yase-Italy inezitsha ezihambile emhlabeni jikelele ngokuthandwa kwazo kanye nezinye ezimnandi njengazo.
IFrance ine-gastronomy eyingqayizivele, ngokuzimisela ukwamukela njengoba uyinambitha. Kusukela kumakhekhe amahle kakhulu kuya kokulula nokusobala. Ingabe uya eFrance? Ngaphezu kweminyuziyamu nezinqaba kukhona i-gastronomy yayo. Ukupheka kwe-Fracnese kuyamnandi kokunoshukela nosawoti. Ukudla!
Vakashela emthonjeni we-Urederra
Ipaki yemvelo yeNacedero del Urederra eNavarra isinikeza indawo yemvelo yobuhle obukhulu ukuyijabulela nomndeni.
Izembatho ezijwayelekile zaseJalimane
Izingubo ezijwayelekile zaseJalimane zivela esifundeni saseBavaria futhi zisetshenziswa emaholidini kazwelonke afana ne-Oktoberfest.
Izingubo ezijwayelekile zase-Italy
Kunokukhethwa okukhulu kwezingubo ezijwayelekile zase-Italiya, ezinezingcezu ezivela ku-Renaissance, ugqozi lwamaRoma, kanye nezembatho zeVenetian.
Ukuvakashela ama-Artá Caves eMallorca
AmaCave asendulo ase-Artá atholakala eMallorca futhi anikeza ukuvakashelwa okuthakazelisayo kulesi siqhingi, ngezakhiwo zasendulo.
Yini ongayibona kuVila Real de Santo Antonio
Idolobha lasePortugal iVila Real de Santo Antonio liyindawo ethule enamabhishi amahle atholakala endaweni yase-Algarve.
Yini ongayibona eGarganta la Olla
Ihlobo e-Extremadura? Bese udabula iGarganta la Olla, hamba imigwaqo yayo, wazi izindlu zayo ezindala futhi uziqabule ezimpophomeni nasemachibini emvelo.
Yini ongayibona eNiebla, eHuelva
Idolobha laseNiebla eHuelva linikela ngefa elikhulu lamasiko nomlando, nezindonga zalo ezaziwayo nezinye izindawo ezithakazelisayo.
Yini ongayibona e-oravora
Kuleli hlobo ungazi elinye lamadolobha amadala futhi amahle kakhulu eYurophu: i-oravora, ePortugal: amasonto, amathempeli amaRoma, ama-menhirs.
Yini okufanele uyenze edolobhaneni laseRocío
Uma uthanda amadolobha amadala futhi amahle futhi uhambela izindawo ezingcwele, qiniseka ukuthi uvakashela i-El Rocío, idolobha elihle lase-Andalusi.
Okufanele ukwenze esiqhingini saseTavira
Ihlobo liyeza! Uma uwela ePortugal ungavakashela ugu lwe-Algarve futhi lapho uvakashele isiQhingi saseTavira ngamabhishi aso. Futhi ungenza ngisho nobunqunu.
Yini ongayibona eMorella
Kuleli hlobo ungavakashela iMorella, idolobha eliphakathi kwamadolobha amahle kakhulu eSpain: umsele wamanzi, inqaba yasendulo, ama-truffle amnyama ...
Yini ongayibona eDinant, eBelgium
Yini efana ngayo amaSaxophones amaGothic, imihume kanye namasonto ababhishobhi abakhulu? I-Dinant, idolobha elincane elihle esifundeni saseWallonia eBelgium.
Lamego, ongakubona kule pearl yasePortugal
Ngabe uya ePortugal? Bese ungakhohlwa ukuvakashela eLamego, eduze kakhulu nePorto: yiparele lezivakashi elinezivini, inqaba, amasonto, imikhosi nemikhosi.
Imayini Yosawoti yaseWieliczka
Endaweni yedolobha elikhulu iKrakow kukhona iWieliczka Salt Mines, ethathwa njenge ...
Ukuhlala eLondon, kunconyiwe?
ILondon ayisiyona kuphela inhloko-dolobha yase-United Kingdom kepha ingenye yamadolobha abaluleke kakhulu emhlabeni womabili ...
ISierra Magina Ipaki Yemvelo eJaén
Ipaki yemvelo yaseSierra Mágina isinikeza izindawo zemvelo zobuhle obukhulu, izindlela zokuhamba izintaba nemizana emincane enezinqaba.
ICap de Creus, umhlaba, ilanga nolwandle
Kuthiwani ngokwazi iphuzu elisempumalanga yeSpain? YiCap de Creus., ECatalonia, indawo ehlanganisa umhlaba nolwandle njengabanye abambalwa.
Yini ongayibona ku-ilavila ngosuku olulodwa
Izindonga zangeNkathi Ephakathi ze-ilavila ziyisibonakaliso saleli dolobha eseliphila isikhathi eside iCastilian-Leonese. ESpain iningi lazo ...
Thola amadolobha amahle kakhulu e-Asturias
Thola amanye amadolobha amahle kakhulu e-Asturias anezintaba noma izindawo ezisogwini. Imizana egcwele intelezi yokubalekela ngempelasonto.
Vakashela iSanctuary yeBien Aparecida
ISpain inezindawo eziningi ezingokwenkolo ezinconyiwe. Kungani ungavakasheli indawo engcwele yaseVirgen de la Bien Aparecida, usanta waseCantabria?
ICastañar del Tiemblo eCastilla y León
Siphakathi nentwasahlobo futhi wonke umuntu ufuna izindawo zokunyuka, izindawo zemvelo ze ...
ISegóbriga, ipaki lemivubukulo eSpain
Kungani ungahambi kule mpelasonto ukubona iSegóbriga Archaeological Park? Kuyisiza esihle, esinamanxiwa agcinwe kahle futhi nethuba lokuzungeza nxazonke.
Vakashela amachibi aseSomiedo e-Asturias
Amachibi aseSomiedo ase-Asturias, eSomiedo Natural Park futhi angabonakala ngenxa yemizila ethile yokuhamba izintaba.
Yini ongayibona eMalta, lapho uya khona eYurophu
Qhubeka uvakashele iMalta kuleli hlobo. Inamabhishi, iminyuziyamu, umlando wangaphambilini nomlando wasendulo. Ngeke ube nesithukuthezi ngomzuzwana!
Amasimu amahle kakhulu eBarcelona
Enye yezinjabulo ezilethwa intwasahlobo ukuhlala ithala ukuze uphuze okumnandi ...
ILagunas de Ruidera Natural Park, ehamba phambili enhlonhlweni
Kuthiwani ngokubaleka ngempelasonto eLagunas de Ruidera Park? Umkhondo wamachweba aluhlaza okwesibhakabhaka, oxhumene nezimpophoma nemifudlana. Ipharadesi lasemhlabeni eSpain.
IGiant's Causeway, isimangaliso semvelo e-Ireland
INyakatho ye-Ireland inesimanga semvelo esimangalisayo: I-Giant 'Causeway! Amakholomu e-Basalt phakathi komhlaba nolwandle ...
The Cliffs of Moher, ukuvakashelwa okukhethekile e-Ireland
Ungaphuthelwa enye yezindawo ezinhle kakhulu e-Ireland nelinye lamawa amahle kakhulu emhlabeni: Amawa aseMoher!
Yini ongayibona edolobheni laseLeuven
Idolobha laseLeuven lisendaweni nje engamakhilomitha ambalwa ukusuka eBrussels futhi ukuvakasha okuhle ukukwazi leli dolobha laseyunivesithi elinokunikeza okuningi.
Yini ongayibona edolobheni laseVolendam
Idolobha laseVolendam lisondelene kakhulu ne-Amsterdam futhi ukuvakasha okuhle ukujabulela idolobhana elihle lokudoba eseliphenduke izivakashi.
Yazi i-Bran Castle
Uma uthanda indaba ka-Count Dracula, ungavakashela i-Bran castle eRomania ... futhi usebenzise nobusuku obulibalekayo be-Halloween!
Ukuhamba ngodonga lwaseLugo
I-Easter iyeza futhi ungayisebenzisa ngokunenzuzo ukuze ubalekele uLugo. Uyalwazi udonga lwalo? Yisizinda Samagugu Omhlaba futhi sikhulu!
Yini ongayibona eVerona
Idolobha lase-Italy iVerona akuyona nje indawo obekufanele ihlale kuyo uRomeo noJuliet, kepha linikeza ukukhethwa okuhle kwamatshe esikhumbuzo namasonto okufanele bawavakashele.
Vakashela iPalacio da Pena eSintra
Thola iPalacio da Pena ebabazekayo eSintra, isigamu nje sehora ukusuka eLisbon, isigodlo esisendaweni yemvelo enikeza ukwakhiwa kwasekuqaleni.
I-Belchite, indawo okuyiwa kuyo ngomlando eZaragoza
I-Easter iyeza futhi eSpain ungavakashela iBelchite, idolobha lesipoki le-Civil War. Thatha uhambo phakathi kwamanxiwa alo ebusuku!
Vakashela amanxiwa eHerculaneum
Ngabe uya e-Italy? Uyawathanda amanxiwa? Ingabe uzovakashela iPompeii? Ngemuva kwalokho ungashiyi amanxiwa aseHerculaneum. Ziyamangalisa futhi zisondelene kakhulu!
Sintra, ongakubona nokukwenza edolobheni lasePortugal
Thola ukuthi yini ongayibona futhi uyenze edolobheni lasePutukezi iSintra, ibanga elifushane ukusuka eLisbon, idolobha eligcwele izigodlo nezindawo zemvelo zobuhle obukhulu.
Amabhishi amahle kakhulu ePortugal
Siyakutshela ukuthi yimaphi amabhishi amahle kakhulu ePortugal, izwe elinogu lwamakhulu amakhilomitha ukujabulela amabhishi amahle anesihlabathi.
Isigodi Sokuwa eMadrid
Izintaba ezisenyakatho yeMadrid zingenye yezindawo ezinhle kakhulu ongazivakashela ngaphakathi koMphakathi. Indawo…
I-Almodóvar Castle, Game of Thrones eSpain
Uyayithanda i-Game of Thrones? ESpain ungavakashela iCastle of Almodóvar, ochungechungeni lwaseHighgarden, ikhaya lamaTyrells. Enye yezinto ezihamba phambili eSpain.
Indawo Yasebukhosini Yepulazi laseSegovia
Amakhilomitha angama-80 ukusuka eMadrid namakhilomitha ayi-13 ukusuka eSegovia yiReal Sitio de la Granja de ...
Yazi i-Islet yaseVila Franca do Campo
Uma uthanda iziqhingi noma izindawo ezifuna ukwazi, vakashela isiqhingi saseVila Franca e-Azores. I-lagoon exhunywe olwandle, ibhishi elincane, indawo yokuphupha.
Imizi eyi-10 yaseJalimane yohambo oluthokozisayo
Thola amadolobha ayishumi aseJalimane lapho uzofuna ukuzilahlekisela khona futhi ujabulele wonke amakhona, abazongenela ukhetho lwakho olulandelayo.
Imibono eyi-10 yokuphunyuka ngePhasika
Sikunikeza imibono eyishumi yokubalekela ukwenza leli Phasika, ezindaweni ezise-Europe ezingajatshulelwa ezinsukwini ezimbalwa.
Izindawo ezibalulekile ongazivakashela e-Italy
Thola ezinye izindawo ezibalulekile okufanele zivakashelwe e-Italy. Imizi emikhulu okufanele sibe nayo ohlwini lwethu lokuhamba.
Hlela uhambo oluhle oluya eMalta
Hlela uhambo olukhulu oluya eMalta, isiqhingi saseMedithera esinikeza izindawo ezinhle, amabhishi namadolobha asendulo anomlando omningi.
Vakashela emabhishi aseDubrovnik
Thola ukuvakashelwa okuhle kakhulu emabhishi aseDubrovnik namaphethelo, amakhona anokuthula eduze kwedolobha ukujabulela iholide eliphumuzayo.
I-Wild Atlantic Way, umgwaqo osogwini e-Ireland
Qasha imoto e-Ireland bese usuka ogwini lwayo lwe-Atlantic: 2500 km kuWild Atlantic Coast enhle! Amabhishi, amawa, izinqaba, amadolobhana.
Yini ongayibona edolobheni lase-Oxford
I-Oxford yidolobha laseyunivesithi eliseduze kakhulu neLondon, liyenza indawo ekahle yokuvakashela nokuthola izindawo zalo ezithakazelisayo.
Vakashela isakhiwo sezindunduma saseCorrubedo eGalicia
Isakhiwo sezindunduma iCorrubedo siseGalicia, edolobheni elisogwini eRibeira futhi sinikeza izikhala zemvelo zobuhle obukhulu.
Ibhishi laseGulpiyuri, iparele le-Asturias
Ngabe uhlela ukuya olwandle ehlobo elizayo? Bese ubheka i-Asturias namabhishi ayo. ElikaGulpiyuri liyiparele eliyigugu.
Amarobhothi azolawula ukungena eSt.Mark's Square kusuka ngo-2018
Impela iSt.Mark's, iwuphawu lomlando weVenice. Njalo ngonyaka cishe abantu abayizigidi ezingama-40 ...
Yini ongayibona esiqhingini saseKrethe
Thola konke ongakubona nokwazi esiqhingini esihle saseKrethe, indawo egcwele izindawo zemivubukulo, umlando namabhishi amahle.
Yini ongayivakashela eCzech Republic
Thola ukuthi yini ongayivakashela eCzech Republic, izwe eligcwele amadolobha amahle asendulo kanye namathafa emvelo amahle kakhulu.
I-Tropea, itshe eliyigugu lase-Italy
Kwa-Actualidad Viajes sithanda ukwazi izindawo ezintsha nezinhle, njengale eTropea, itshe eliyigugu lase-Italy ozofuna ukulivakashela ngemuva kokufunda lokhu.
Amaswidi ajwayelekile kaKhisimusi ayi-10 eSpain
Lapho sihamba kunezindlela ezahlukahlukene zokwazi izwe, kungaba ngomlando walo, izinganekwane zalo, ubuciko balo noma ...
Ukuhambela Okubalulekile Okungu-16 eSardinia II
Sikukhombisa ukuvakasha okuyisishiyagalombili okudingeka ukwenze esiqhingini esihle saseSardinia, kusuka emadolobheni amancane kuye emadepho.
Ukuhambela Okubalulekile Okungu-16 eSardinia I
Thola ukuvakashelwa okubalulekile esiqhingini saseSardinia, indawo egcwele amabhishi, amadolobha amahle namadolobha anomlando.
Imizi yase-Algarve yokuvakashela eningizimu yePortugal
Lawa ngamadolobha namadolobha abaluleke kakhulu engxenyeni eseningizimu yePortugal, eyaziwa ngokuthi i-Algarve, indawo evakasha kakhulu.
5 amadolobha amahle eRías Baixas yaseGalicia
Thola amadolobha amahlanu amahle eRías Baixas yaseGalicia, indawo egcwele amadolobha asogwini enobuntu obuhle.
Izindawo eziyi-7 ezingaziwa kakhulu ePortugal
Thola izindawo eziyi-7 ezingaziwa kakhulu ePortugal, izindawo ezithakazelisa kakhulu ezingadumile kakhulu kepha eziyigugu elihle.
4 izindawo kufanele uvakashele ePortugal
Siyakutshela ukuthi yiziphi izindawo ezine ezibalulekile ongazivakashela ePortugal. Amadolobha amane amahle anezikhumbuzo nezindawo zemvelo.
I-Sigüenza, kusukela edolobheni lase-doncel kuya ezindaweni ezihamba phambili zasemakhaya zango-2017
Kulo nyaka uSigüenza uzuze isicoco seCapital of Rural Tourism esinikezwe yingosi yokubaleka yasemaPhandleni, ethi,…
O Camiño dos Faros de Galicia ngezigaba eziyisishiyagalombili II
Sesibonile izigaba ezintathu zokuqala ze-O Camiño dos Faros, umzila oyingqayizivele ogwini lwaseGalician ukuthi ...
'O Camiño dos Faros' eGalicia ngezigaba eziyisishiyagalombili I
I-O Camiño dos Faros iyindlela enhle yokuhamba izintaba eGalicia ehamba ogwini olusenyakatho phakathi kwamathafa amahle.
ISvalbard, indawo ekude, efriziwe nenhle
Ingabe uthanda izindawo ezikude, i-100% yemvelo? Iziqhingi zaseSvalbard kufanele zibe kumzila wakho: izinguzunga zeqhwa, izintaba, amabhere asezindaweni eziphakeme, izimayini ezindala, isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka
I-6 sestieri yaseVenice okufanele uyazi ohambweni lwakho
Kuningi okulotshwe ngeVenice, idolobha lemisele. Uhlobo lomnyuziyamu ovulekile we ...
Izinto okufanele uzibone futhi uzenze lapho uvakashele eScotland
Thola izinto ezithokozisayo ongazibona futhi uzenze eScotland, izwe eligcwele izimfihlakalo, umlando nemizila egcwele inqaba.
U-Leeuwarden noValletta, iziNhloko ZaseYurophu Zamasiko 2018
Kutholakala amahora amabili ukusuka e-Amsterdam, idolobha laseDashi iLeeuwarden lidume ngamachibi alo kanye nemisele yalo kanye ne ...
IGuggenheim Museum eseBilbao igubha iminyaka engu-20 yasungulwa
Ngemuva kokuvulwa kwayo ngo-1997, iMyuziyamu yaseGuggenheim eseBilbao yaliguqula ngokuphelele leli dolobha lisuka endaweni yokubuka amasiko ...
Izindawo ezithakazelisayo eGran Canaria
Thola lezi zindawo ezinhle onazo esiqhingini saseGran Canaria, isiqhingi esinezindawo zemvelo, izikhungo zomlando namasayithi.
IThyssen Museum igubha iminyaka engama-25 yasungulwa ngo-Okthoba
EPaseo del Prado eMadrid uzothola lokho okwaziwa kakhulu ngokuthi 'unxantathu wobuciko' noma ...
Indlela kaJane Austen ngomlando wokufa kwakhe
Lo 2017 umaka unyaka wama-200 wokushona kukaJane Austen, ongomunye wababhali baseBrithani abakhonze kakhulu ...
Ukuhambahamba ngeSan Marino
Uma uya eholidini uye e-Italy, vakashela iSan Marino, elinye lamazwe amancane kunawo wonke emhlabeni: izinqaba, amadolobhana asezindaweni zasendulo kanye namathafa.
Iziqhingi ezinhle zaseYurophu ukuthatha uhambo
Sikunikeza imibono embalwa ukuhlela uhambo oluya kwesinye seziqhingi ezithandwa kakhulu e-Europe njengamanje, ukusuka e-Ibiza kuya eKrethe.
Isigodlo se-Infante uDon Luis de Boadilla del Monte
Esinye sezikhumbuzo ezingaziwa kakhulu zaseSpain yiPalacio del Infante don Luis eBoadilla del Monte. Kuyatholakala…
Izindawo ezi-5 ezinhle kakhulu zokuhamba wedwa kulokhu kuwa
Kuyiqiniso ukuthi ukuthatha uhambo enkampanini yabangane noma yomndeni kuyinto emnandi kakhulu futhi igcwele ...
Izindawo ezihamba phambili zezivakashi eYurophu ngokusho kwe-TripAdvisor
Sizobona ezinye zezindawo zezivakashi ezithakazelisa eYurophu, ezinamatshe esikhumbuzo nezindawo ezibalulekile kubahambi.
Izindawo ezikhangayo ongazivakashela eFrance
Thola ezinye izindawo ezinhle nezithandekayo eFrance, kusuka emzileni osuka ezinqabeni uye emadolobheni asezindaweni eziphakathi nasemaphandleni ase-fairytale
Imizi eshibhile futhi ebiza kakhulu eYurophu ongayivakashela
Namuhla sikutshela ukuthi yimaphi amadolobha ashibhile futhi abiza kakhulu eYurophu ongavakashela kuwo. I-athikili efanelekayo yabafundi baka-Erasmus kanye nabahambi baseYurophu bangomuso
Amadolobha amahle asogwini e-Andalusia
Sikukhombisa amanye amadolobha amahle kakhulu asogwini e-Andalusia. Ukukhethwa kwamadolobha amancane ongakuvakashela.
Yini ongayibona futhi uyenze edolobheni laseBelfast
Thola konke ongakubona nokwenze edolobheni elikhulu laseBelfast, ngemboni nezinkinga ezedlule, namuhla sekuyidolobha lanamuhla.
IVenice izokhawulela ukufinyelela eSt
Lesi sikwele saseVenetian esaziwa ngolimi lwaso loqobo njengePiazza San Marco, mhlawumbe siyindawo emele kakhulu ...
Izindawo ze-7 zemvelo eYurophu ezingaphuthelwa
Thola izingosi zemvelo eziyisikhombisa ezingakholeki eYurophu ukuze ulahleke eholidini lakho elilandelayo, kusukela ezingwadule kuya emachibini nasemabhishi.
Izinto okufanele uzenze eGalicia ehlobo
Zitholele zonke izinto ezithokozisayo nezijabulisayo ongazenza eGalicia ehlobo, indawo oya kuyo ethandwa kakhulu.
Okuhlangenwe nakho okuhle okungu-5 ukuhlala ohambweni oluya eFrance
Uma sikhuluma ngeFrance sikhuluma ngelinye lamazwe avakashelwa kakhulu emhlabeni ngamasimu awo amahle, ...
Vakashela amadolobha aseduze nePorto
Sikukhombisa imibono ethokozisayo yokwenza uhambo oluya emadolobheni aseduze nePorto, izindawo ezithakazelisa kakhulu ezingavakashelwa ngosuku olulodwa.
Ukuthola 'iminyuziyamu emihlanu, omunye umzila waseMadrid
IValle del Jerte iba bomvu ukugubha iCerecera 2017
Ukubuka izimbali ze-cherry entwasahlobo kuyinto emangalisayo. EJapan lo mkhuba waziwa njengeSakura ...
Amakhona akhethekile eGalician Rías Baixas
Sizothola amanye amakhona akhethekile eGalician Rías Baixas, anezimpophoma, iziqhingi nezinqaba zokuvakasha.
Vakashela edolobheni laseBologna e-Italy, ongakubona
Thola ukuthi yini ongayibona eBologna lapho uvakashele idolobha elake lagcwala imibhoshongo futhi lisaziwa ngamaphasishi alo.
Umhlahlandlela wabavakashi baseNantes, ongakubona edolobheni laseFrance
Jabulela umhlahlandlela olula lapho sikukhombisa khona izindawo ongazibona edolobheni laseNantes, elisendaweni yasePays de la Loire.
Imidondoshiya eyisithupha yokhuni yehlathi laseCopenhagen
Kukhona indawo eYurophu lapho kukhona khona umlingo. Emaphethelweni eCopenhagen kukhona ihlathi e ...
Yini ongayibona futhi uyenze e-Aix-en-Provence, eFrance
Idolobha elincane lase-Aix-en-Provence liyindawo ebukekayo ngempela eningizimu yeFrance, kunokuningi ongakubona nokwenzayo.
Okubabayo futhi okumnandi kakhulu, lokhu kuyi-gastronomy yesiGreki
Ukudla kweMedithera kufana nokudla okunempilo nokulinganisela okunikeza izinzuzo ezahlukahlukene zezempilo kulabo ...
Ukuya eCarcassonne, eFrance, ongakubona
Idolobha laseCarcassonne noma iCarcassonne liseningizimu yeFrance futhi liyidolobha eligcinwe kahle kakhulu futhi elihle kakhulu langezikhathi zasendulo.
ILanguedoc, ehlobo eFrance
Ihlobo liyeza. Ngabe ubucabanga ngeningizimu yeFrance? ILanguedoc inikeza amasiko, umlando namabhishi ahlukile. Kuzoba ihlobo elihle.
Izindawo eziyi-11 okufanele uzibone e-Asturias
Thola izindawo eziyi-11 e-Asturias ongeke uziphuthe. Kusuka emizileni yemvelo kuya emadolobheni, izikhumbuzo noma amadolobha amancane
I-Titlis, ibhuloho lokumiswa elide kunazo zonke futhi elimnandi kunazo zonke eYurophu
ISwitzerland inezindawo ezinhle futhi iTitlis Suspension Bridge akufanele ikholwe. Yibhuloho lokumiswa eliphakeme kakhulu eYurophu futhi lizungezwe izintaba!
Izindawo ze-10 ezishibhile zaseYurophu zamaholide
Thola izindawo eziyi-10 ezishibhile zaseYurophu ukujabulela iholide lakho elilandelayo, ngamadolobha athakazelisayo futhi angabizi kakhulu ongawabona.
Amabhishi angu-7 ahamba phambili eningizimu ye-Italy
Lapho isimo sezulu esihle sifika sesivele sifuna ukuya olwandle, futhi njengoba labo abasendaweni yethu sebaziwa, si ...
Amaswidi ajwayelekile kakhulu ama-Easter eSpain
Ngesikhathi seviki elingcwele, iSpain iyaguqulwa. Kunezindlela eziningi zokuthola leli lizwe laseYurophu ngokusebenzisa ...
Amadolobha ama-5 aseYurophu abalekela
Thola amadolobha amahlanu aseYurophu asebenze izindawo ezinhle zokubaleka ngempelasonto emfushane.
I-Riquewihr neColmar, amagugu amabili e-Alsace
I-Riquewihr neColmar ngamadolobha amabili ase-Alsace asephenduke amagugu kwezokuvakasha ngenxa yenhle yawo nezindlu zawo zamapulangwe.
Isifunda saseNormandy eFrance, ongakubona nokukwenza
Isifunda saseNormandy saseFrance sinokuningi esingakunikeza, kusuka eMont Saint-Michel enhle kuya kumamayela asogwini nemizana emihle.
UGeirangerfjord, umfula omuhle lapho kwaqoshwa khona iThe Wave
Eyodwa isetshenziswa kakhulu kuma-movie enhlekelele abantu baseMelika abenza kaningi. Uma kungeyona into enhle kakhulu ...
Izindawo emhlabeni wonke zokugubha usuku lwe-St. Patrick
Thola zonke lezo zindawo emhlabeni lapho ungagubha khona umkhosi kaSanta Patrick, usanta ongumvikeli wase-Ireland.
UDevon, ihlobo laseNgilandi
Ngabe ufuna ukuba neholide lesiNgisi ehlobo? Ngemuva kwalokho vakashela iDevon: izinqaba, amawa, amabhishi, amadolobha asezingeni eliphakathi, ubhiya.
Izizathu zokuvakashela iziqhingi zaseCanary
Thola ezinye zezizathu eziyinhloko zokuthi kungani iCanary Islands ikhethwe ngabaningi njengendawo yamaholide.
Amabhishi amahle kakhulu eCroatia
Thola amanye amabhishi ahlonishwa kakhulu eCroatia. Amabhishi asemadolobheni noma amabhishi amahle eziqhingini, okunye akhetheke kakhulu.
Izimangaliso Zasemaphandleni Ezi-7 zaseSpain
Thola ukuthi iziphi izimangaliso zasemaphandleni eziyi-7 zaseSpain. Amadolobha ayisikhombisa amahle asemaphandleni akhethwe yikhasi le-Toprural.
5 Iminyuziyamu yokuvakashela eJalimane
Esihlokweni sanamuhla sikulethela iminyuziyamu emihlanu ozoyivakashela eJalimane. Uma uhlela ukuya ezweni laseJalimane kungekudala, qiniseka ukuthi ubavakashela.
I-Interrail: izindaba namathiphu wokuhamba ngesitimela eYurophu
Isikhathi eside, i-Interrail bekuyindlela yabantu abasha yokwazi amanye amasiko futhi ngaleyo ndlela baqale izifundo zabo ...
Ukuvakasha kwangaphandle eLuxembourg
Uyayazi iLuxembourg? Yizwe elincane kepha linakho konke ukujabulela ezokuvakasha ngaphandle: imizila yabagibeli bamabhayisikili nabagibeli bezintaba, izigodi nezinqaba.
Uhambo oluya eTaormina, eSicily, ukuthi yini ongayibona futhi uyenze
ITaormina ingelinye lamadolobha amahle kakhulu kuyo yonke iSicily, enemigwaqo yasendulo nokubukwa okumangazayo kolwandle ne-Etna.
Amabhishi ama-6 amahle aseCroatia wokufuna ukugeja
Amanzi acwebe iCrystal namathafa angenabala, lezi ngezinye zezichasiso ezichaza kangcono ugu lwaseCroatia. Kusuka eDubrovnik ...
Izizathu zokujabulela uhambo oluya e-Ireland
Thola ukuthi yiziphi izizathu eziyinhloko ezingaholela ekutheni uthathe uhambo oluya e-Ireland. Kusukela emikhosini yayo kuya ezinqabeni nasemathafeni.
Yini ongayibona nokuvakashela edolobheni laseDublin
Inhlokodolobha yase-Ireland isinikeza izinto eziningi esizibonayo. Indawo lapho izivakashi eziningi ziya khona ziyofuna ...
Kulo nyaka balekela eTeruel noma eVerona ngoSuku Lwezithandani ngothando lwakho
Izwekazi lakudala laqanjwa ngokuhlonipha indodakazi enhle yenkosi yaseFenike u-Agénor, owakhohliswa nguZeus ...
Yini ongayibona eBordeaux ngempelasonto
Thola konke okubalulekile ekuvakasheni kwakho edolobheni laseBordeaux, nedolobha lakhona elihle elidala nezakhiwo zalo ezinhle.
Izindawo eziyi-10 eSpain ukweqa ubusika obubandayo
Thola izindawo eziyi-10 eSpain ukuze ubalekele ubusika obubandayo, izindlela eziyishumi ezinhle zokubeka ukufudumala nokusondela kancane.
Ukuvakasha okwenziwa eduze kwaseRoma
Thola ukuvakashelwa okuhlanu ngaseRoma ongakwenza uma uya edolobheni, usuka ePompeii uye e-Villa del Este noma eHerculaneum enhle.
3 izinqaba ezinhle zaseFrance ongazazi
Ungahlali ezinqabeni eziheha kakhulu zaseLoire. Thola ezinye ezinhle kakhulu noma ngaphezulu. Nazi ezintathu ezingaziwa kancane futhi ezimangalisayo.
IWarwick Castle iqala ukukhangana kweMpi yamaRoses Amabili
Eduze kwedolobha lapho kwazalelwa khona uWilliam Shakespeare, iStratford upon Avon, yiWarwick, idolobha eliyikhaya le…
Izindawo ezintsha ezi-5 ezintsha zaseYurophu
Thola izindawo ezinhlanu zaseYurophu ezisazovela zibe yizindawo zokuvakasha ezinokuheha okuningi.
Amadolobha ase-Europe ukuwavakashela ebusika
Thola amadolobha ase-8 ase-Europe ukujabulela ubusika kule sizini, ngezindawo ezimangazayo nezijabulisayo ongazivakashela.
Izindawo zempelasonto ende kaDisemba
Zijabulele iziphakamiso zohambo esizenzela leli bhuloho ngoDisemba. Ezinye izindlela ezithokozisayo zohambo.
Vakashela eVatican City
Uma uzovakashela i-Vatican City kungekudala, lapha sikushiya nezeluleko ezijwayelekile futhi, okubaluleke kakhulu, ikhodi yokugqoka.
AmaCroqueteros, ungadla kuphi ama-croquette amahle kakhulu eMadrid?
ICroquette ingenye yezibiliboco ezithandwa kakhulu kwi-gastronomy yaseSpain. Umsuka wawo ungamakhulu eminyaka edlule ku ...
Ukuvakasha okungu-5 eduze kwaseFlorence
Thola ukuvakashelwa okuhlanu okuthakazelisayo eduze kwedolobha laseFlorence, ukuze ulahleke emadolobheni amancane eTuscany noma ngasogwini.
I-Anglesey Island, isiqhingi samaDruid
Uma uthanda isiko lamaCeltic qiniseka ukuthi uvakashela i-Isle of Anglesey eNyakatho Wales. enhle nomaphi lapho uyibuka khona, kuyindawo enhle ongayithola.
Thola izindawo eziyishumi ezinhle kakhulu eGalicia, izindawo zemvelo, izindlu zokukhanyisa ekupheleni komhlaba namabhange anemibono emangalisayo.
I-Aegean Sea igcwele amabhishi amahle kakhulu nezindawo ezinhle zezivakashi ezisatshalaliswa emazweni ahlukene. …
Ukuhamba okune emahlathini aseSpain kulokhu kuwa
Ekwindla isikhathi esihle sokwenza lokho kuphunyuka esilinde kona ethile yeSpain. Amazinga okushisa…
Izindawo ezi-7 ezinhle kakhulu e-Italy
Thola izindawo eziyisikhombisa ezinhle kakhulu e-Italy, kusuka emadolobheni amancane asogwini kuya emadolobheni abaluleke kakhulu agcwele izikhumbuzo.
Izindawo ezingama-7 ezinhle eSlovenia
Thola izindawo eziyi-7 ezinhle ongaphuthelwa zona eSlovenia, izwe eligcwele izindawo ezikhethekile ongazivakashela ohambweni lwakho.
Ungalugubha kanjani uSuku Lamagugu aseSpain eMadrid?
IPanoramic yeMeya yePlaza eMadrid Umkhosi Kazwelonke WaseSpain uzokwenzeka ngo-Okthoba 12 noma, njengoba ...
Ungayeki ukuvakashela iBelfast, idolobha namuhla eliphila ngeTitanic neMpi Yobukhosi. Ungaphuthelwa!
Ibhola likanobhutshuzwayo ngumdlalo osuphenduke into eyenzeka emhlabeni wonke ngezigidigidi zabalandeli emhlabeni jikelele. Amakilabhu ...
Jabulela iholide ongenakulibaleka eGrandvalira
Uma uthanda ukushibilika eqhweni, ukushibilika eqhweni, ukushova noma yimuphi omunye umdlalo ohlobene neqhwa, eGrandvalira uzochitha izinsuku ongasoze wazilibala.
Yini okufanele uyazi ngomkhosi we-Oktoberfest eMunich?
Izolo kuqale uhlelo olusha lomkhosi odumile waseJalimane emhlabeni: i-Oktoberfest. Le fair, isihloko sayo ...
Okufanele ukwenze lapho uvakashela iMalta
Ngabe uya eMalta? Lezi ziqhingi ezintathu zamathafa, umlando, amathempeli asendulo kanye ne-gastronomy emnandi. Ungaphuthelwa!
Izinto eziyi-7 akekho okutshele ngeCamino de Santiago
Kusukela endulo, ukuya ezindaweni ezingcwele bekuvamile ezinkolweni eziningi. Lezi zohambo lwazo lwalunencazelo ...
Isifunda esimangazayo saseSanta Denis eParis
Ngena esifundeni saseSaint Denis eParis lapho ungabona khona izimakethe zayo kanye nesonto layo elihlaba umxhwele, kanye nokukwazi ukuphuza ebusuku
Izindawo ezingama-8 zemilingo eSpain (II)
Thola izindawo eziyisishiyagalombili zemilingo eSpain lapho kucishe kube yisibopho sokulahleka futhi ujabulele indawo egcwele intelezi.
Izindawo ezingama-8 zemilingo eSpain (I)
Thola izindawo eziyisishiyagalombili zemilingo eSpain, izindawo ezikhethekile nezemvelo lapho ungazilahlekisela khona ukuze ujabulele imvelo ehlukile.
Okufanele ukwenze ebusika eFrance
Awuqinisekile ukuthi wenzeni eFrance phakathi nobusika? Ngalesi siqondisi uzolusebenzisa kakhulu uhambo lwakho oludabula emazweni aseGallic. Kuthenjisiwe!
I-Agrigento (SICILY): uhambo oluya eGrisi lasendulo
Uma uya eSicily awukwazi ukuphuthelwa i-Agrigento, indawo eyingqayizivele efana neGreece yasendulo enezikhumbuzo zayo ezinhle neminyuziyamu
Izinhlelo zamahhala zenziwa eCopenhagen
Sonke siyathanda ukuhamba, ikakhulukazi uma ngokwenza njalo singonga imali ngoba kwesinye isikhathi le njabulo ...
Isonto elidabukisayo lamagebhezi angama-40.000
Funda zonke izimfihlo zeSonto lamaSkulls angama-40.000, asedolobheni laseSedlec (Czech Republic), indawo eyingqayizivele nokufanele ubonwe
Amaholide ashibhile eSardinia
Bhala phansi lolu lwazi namathiphu wokujabulela iSardinia nobhaka wakho ehlombe.
Imizila emi-3 edabula iSpain yezingane, intsha kanye nabantu abadala
Noma yimuphi ubudala kuhle ukuya ku-adventure. Manje njengoba amaholidi esondela kwabaningi, kungahle kube kuhle ...
Imizana emihle kakhulu yaseBurgundy, eFrance
Ezweni ngalinye lase-Europe kunamadolobha namadolobha afihliwe asendulo asesekhona kuze kube namuhla futhi okuyizindawo ...
Thola i-Ibiza ngale kwephathi
Isiqhingi sase-Ibiza singaphezu kwephathi nje, ngakho-ke sizothola ezinye izinto okufanele sizenze futhi sizibone, kusukela eDalt Vilas kuya ezimakethe.
Jungfrau Park, izimfihlakalo zasendulo e-Interlaken
Uma uthanda i-astronaut yasendulo kanye nemibono yabokufika ungavakashela iJungfrau Park, ipaki yeVon Däniken e-Interlaken.
Izindawo zothando ongazivakashela e-Italy
Thola izindawo ezimbalwa zothando e-Italy, izindawo ozijwayele nezinye ebeziyizisetho zama-movie ezothando.
Amabhishi amahle kakhulu ezinja eSpanish Mediterranean
Izinja azijwayele ukuthanda ukushiswa yilanga zize zishukiwe kodwa ziyathanda ukungena olwandle. Ngaphandle…
ISicily, ongakubona ngesikhathi sohambo oluya esiqhingini
ISicily, isiqhingi sase-Italiya esiseMedithera esinezinto eziningi esizibonayo, kusukela emadolobheni athakazelisayo kuya kumathafa amangalisayo afana ne-Etna.
IBrihuega, uhambo lwezinzwa eLa Alcarria
Imizuzu engaphezudlwana kwengama-45 ukusuka eMadrid iBrihuega, isigodi sase-Alcarreña okwathi ngenyanga kaJulayi ...
Amadolobha ayishumi avakashelwa kakhulu eSpain
Thola ukuthi yimaphi amadolobha ayi-10 avakashelwa kakhulu eSpain ngokusho kwengosi yaseKayak, esekwe ekusesheni kwayo ukwazi amadolobha athandwa kakhulu.
Landela iScottish Castle Route
IScotland idume ngezinqaba zayo futhi ungalandela iScotland Castle Route ukuze ubone okuhle kakhulu, okuhle kakhulu, okungenakulibaleka
Izindawo ezihamba phambili eTuscany ukuvakashela
Isifunda saseTuscany e-Italy siyindawo egcwele umlando, amasiko namathafa amahle, ngakho-ke sizobona amadolobha amakhulu.
Izindawo ezinconyiwe e-Portugal
Uhambo oludabula iPortugal aluphelele uma ungavakashele la madolobha. Hlanganisa umlando, izindawo, amasiko kanye ne-gastronomy futhi ngeke kulibaleke!
U-Algar de Benagil ePortugal
I-Algar de Benagil iyindawo eyingqayizivele nebabazekayo e-Algarve yasePotugal. Awukwazi ukuphuthelwa lolu bhishi olufihliwe.
I-Aveiro, iPortugal yaseVenetian kakhulu
I-Aveiro yaziwa njengeVenice yasePutukezi, idolobha elincane kodwa elijabulisa kakhulu, elinama-moliceiros nemisele.
Amabhishi amahle kakhulu eCantabria
Ngabe ufuna ukuchitha ihlobo ebhishi? Ngemuva kwalokho yazi amabhishi aseCantabria, phakathi kokuhamba phambili eSpain.
Amabhishi amahle kakhulu oLwandle Olumnyama eRomania
Siyazi amanye amabhishi amahle kakhulu angabonakala ogwini loLwandle Olumnyama eRomania ukuze ukwazi ukujabulela amaholide akho kuleli zwe ngokugcwele.
Ehlobo 2016, ongakubona eJalimane
Siphakamisa ukuthi wazi iGerman kuleli hlobo: bhala phansi izindawo zayo ezihamba phambili zokuvakasha! Uzothola amadolobha amahle, iminyuziyamu, izinqaba nezigodlo!
Izinkambo zikaDracula eTransylvania
Ohambweni lwakho olulandelayo oluya eRomania, qiniseka ukuthatha uhambo mayelana neDracula, umRomania omile kakhulu wegazi futhi othandwayo.
ILa Toja, ipharadesi lokuphumula
ILa Isla de la Toja, ungayibheka njengendawo yokuvakasha lapho ngaphezu kokunqamula futhi uphumule esimisweni ofuna ukusiphilisa emzimbeni.
Amaholide oGwini lwe-Amalfi e-Italy
I-Amalfi Coast iyindawo edumile yokuvakasha e-Italy. Ngamadolobhana amahle abheka ulwandle kusuka emaweni nasezindaweni ongazithola.
ILas Loras, indawo eyingqayizivele yokwakheka komhlaba eSpain
Isifundazwe saseCastilian sasePalencia singaqhosha ngokuba nenye yezindawo ezikhetheke kakhulu futhi ezibaluleke kakhulu ze ...
IPort Isaac, isigodi lapho kuqoshwe khona uDoc Martin
Ngabe ufuna ukuvakashela iPort Isaac, indawo eyingqayizivele lapho kutholakala khona uchungechunge oludumile lukaDoctor Martin? Yebo, landela iseluleko sethu ukuze ungaphuthelwa imininingwane.
Imikhosi eyi-10 eGalicia ngesikhathi sasehlobo okungafanele uyiphuthe (I)
Thola imikhosi eyishumi ehamba phambili eGalicia ngesikhathi sasehlobo. Imikhosi egcwele ama-anecdotes, eyangempela futhi enenjabulo enkulu.
Umzila wokuthola amagugu we-violet eProvence
IFrance ihlale iyibhokisi elihle lezimanga. Akunandaba ukuthi sikwaze kangaki ukuvakashela izwe elingumakhelwane ngoba njalo ...
Isikebhe sosuku esisuka e-Athene, inketho yehlobo
Uma uya e-Athene kuleli hlobo, kuthiwani ngokwenza isikebhe esincane nokubona iziqhingi ezintathu ezinhle ngosuku olulodwa?
Izindawo ezihamba phambili zehlobo eWales
Ngithanda ubuhle bendawo yaseGreat Britain futhi indlela engcono yokubazi ngukuphuma eLondon, okuyi ...
Amabhishi anqunu eDenmark
Ngabe ufuna ukuvakashela amabhishi amahle kakhulu eDenmark? Ungaphuthelwa ukuhlanganiswa kwethu nalo lonke ulwazi nezindawo eDenmark.
IMykonos, isiqhingi saseGrisi esigcwele amakhona amahle
Isiqhingi saseGrisi iMykonos siyindawo ekahle yeholide, enamabhishi, amaphathi, iminyuziyamu nezindlu ezijwayelekile zaseMedithera.
ISantorini, isiqhingi samaGrikhi esinokushona kwelanga okuhle kakhulu
ISantorini ingesinye seziqhingi ezidume kakhulu eGrisi, esingagcini nje ngokwakhiwa kwaso okujwayelekile, kepha futhi nangezindawo zaso nemisebenzi yaso.
I-Wales: Ulimi Nenkolo
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ulimi nenkolo kusebenza kanjani eWales? Lapha unayo yonke imininingwane ukuhlela uhambo lwakho oluya eWales.
IKrethe, indlovukazi yamabhishi amahle kakhulu aseMedithera
Uma uthanda ilanga, ulwandle nolwandle, akukho okungcono kuneGrisi naphakathi kweziqhingi zalo, iCrete yiyona ehamba phambili, ngakho ngikushiyela amabhishi amahle kakhulu.
Imininingwane eyisisekelo nge-Eastern Europe
Ngabe ufuna ukuhamba futhi udinga ukuthola imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka nge-Eastern Europe? Faka i-athikili yethu lapho siveza khona zonke izimfihlo zayo.
ISpain iwine izindondo zeTripadvisor Travelers'Choice TM 2016
Unyaka nonyaka, i-website ye-TripAdvisor yokuhlela nokuvakasha ivuza ama-Travelers'Choice TM Awards for Sites of Interest ukuthi…
5 amabhishi ama-nudist eSpain ukukhombisa okungokwemvelo kakhulu
Thola amabhishi amahlanu amahle aseSpain ukuze uzibonakalise ngendlela engokwemvelo kakhulu. Izikhala maphakathi nemvelo ezinendawo enhle yemvelo.
5 amabhishi amahle eCyprus ukujabulela ihlobo 2016
Kuthiwani ngokujabulela amabhishi aseCyprus kuleli hlobo le-2016? Ngikushiya ezinhlanu eziphakathi kwamabhishi amahle kakhulu eCyprus.
Ijele le-Count of Monte Cristo liseMarseille
Thola izimfihlo zejele laseConte Monte Cristo, indawo ezungezwe ngamanzi okufanele uvakashele ohambweni lwakho oluya eMarseille eFrance.
Izinto eziyi-10 ozozibona eLisbon
Kunezinto eziningi ongazibona eLisbon, inhlokodolobha ecwile emlandweni, enezindawo ezinhle nezinhle nezikhumbuzo eziningi.
Izindawo eziphezulu eziyi-8 ongazivakashela eCroatia
Kunezindawo eziningi ongazivakashela eCroatia, kusuka emapaki emvelo anezimpophoma kuya ezigodini zasendulo kanye namabhishi akhethekile.
Amadolobha Abalulekile ase-Albania
Thola ukuthi yimaphi amadolobha abaluleke kakhulu e-Albania, izindawo ongaphuthelwa kuzo phakathi nohambo lwakho oluya e-Albania.
IScotland nezingubo zayo ezihlukile
Sikutshela zonke izimfihlo zetilidi kanye nezinye izingubo ezihlukile zaseScotland. Uyazazi izingubo zabo ezijwayelekile?
Ihlobo e-Aland Islands, phakathi kweSweden neFinland
Ingabe ufuna ihlobo elihlukile? Ukuhambela i-Aland Islands, iziqhingi zaseFinland lapho kukhulunywa khona isiSwidi.
Umlando omangalisayo wesonto lesonto elikhulu laseJusto eMejorada del Campo
IMejorada del Campo yidolobha elisendaweni eyi-15 km ukusuka eMadrid, esigodini saseHenares, okuyisigcawu…
Ngabe ulokotha uhambe iCaminito del Rey eyingozi?
Ngasenyakatho yeMalaga kuneCaminito del Rey, iphasi elakhelwe ezindongeni zomhosha ...
Okufanele ukwazi ukuvakashela iNeuschwanstein Castle, eJalimane
Uyazithanda izinqaba ezivela ezinganekwaneni? Bese uvakashela iNeuschwanstein castle, ekhuthazwe ama-opera kaWagner.
Ehlobo 2016, thola amabhishi athule kakhulu ePortugal
Ingabe ufuna amabhishi kuleli hlobo le-2016? Bese wazi lawa mabhishi amahle futhi angadumile ePortugal. Uzobathanda!
Uhambo lwezincwadi oludabula iYurophu
Namuhla, sihlonipha usuku olusithintayo, uSuku lweNcwadi, nangaphandle kokunganaki umsebenzi wethu wokuhambahamba, ...
Izindawo ze-6 ezishibhile eYurophu
Thola izindawo eziyisithupha ezishibhile eYurophu, amadolobha ayisithupha abukekayo anokuningi ongakunikela nangabhajethi ephansi.
Izinto ezibalulekile ongazibona ePorto
Thola izinto ezibalulekile okufanele uzibone edolobheni lasePortugal lasePorto, kusukela kuma-winery kuya esitolo sezincwadi esihle kakhulu.
Izinto ezi-5 okufanele zenziwe e-Edinburgh, okumele ukwenze
Thola izinto ezinhlanu ezinhle kakhulu ongazenza edolobheni laseScotland i-Edinburgh, ukujabulela isiko nezikhumbuzo.
Uluhlela kanjani uhambo nokuthi yini ongayibona eBruges
Idolobha laseBruges eBelgium liyindawo egcwele intelezi yasendulo. Thola ukuthi yini ongayibona nokuthi ungafika kanjani kuleli dolobha elihle laseYurophu.
Izinto ezingama-20 okufanele uzenze uma ufika eGalicia (II)
Thola ezinye izinto eziningi ongazenza uma uvakashela iGalicia, enyakatho yeSpain. Indawo egcwele amasiko nezindawo ezihlukile namathafa.
Izinto ezingama-20 okufanele uzenze uma ufika eGalicia (I)
Kunezinto eziningi okufanele uzenze uma uza eGalicia. Thola lezo zinto ezingama-20 ezingenakushoda ekuvakasheleni kwakho lo mphakathi.
Ehlobo 2016, okufanele ukwenze eNorway
Ngabe ucabanga ukuthi iNorway iyindawo enhle kodwa ebizayo? Ungayeki, bhala phansi lolu lwazi ngezindleko nokukhangayo nokuvakasha ukuze ukujabulele.
Kungani kukhona udrako efulethini laseWales? Sikutshela indaba engemuva kophawu lwabantu baseWales. Kusho ukuthini? Thola!
Izinto eziyi-8 ozozibona uzenze e-Amsterdam
Idolobha lase-Amsterdam linezindawo ezithokozisayo ongazibona, njengeRed Light District noma izikwele ezidumile. Ukuvakashelwa okuthakazelisayo edolobheni laseYurophu.
Imikhosi emihlanu emihle yezimbali eYurophu
Namuhla, Mashi 21, intwasahlobo ingena futhi kuza nesikhathi esihle sokuhamba futhi ujabulele owokuqala ...
U-El Pedraforca, uphawu lweCatalonia
IPedraforca iyintaba esendaweni yaseBeguedá (esifundazweni iBarcelona) futhi ikakhulukazi eSerra del Cadí, eCatalan Pre-Pyrenees.
5 amabhishi eSardinia ukujabulela eholidini
Sithole amabhishi amahlanu amahle eSardinia angamapharadesi angempela eMedithera ukujabulela amaholide.
Izikhumbuzo zamagugu omhlaba ezingama-20 eSpain (II)
Thola ukuthi yiziphi ezinye izikhumbuzo eziyishumi eziyigugu zomhlaba eSpain, izindawo ezithakazelisa kakhulu izivakashi.
Imizi eyi-10 eYurophu enezinga eliphezulu kakhulu lempilo
Uyazi ukuthi yimaphi amadolobha ayishumi eYurophu anezinga eliphakeme kakhulu lempilo? Ngabe ucabanga ukuthi kukhona idolobha phakathi kwabo ...
Izikhumbuzo zamagugu omhlaba ezingama-20 eSpain (I)
ESpain kunezikhumbuzo eziningi eziye zamenyezelwa njenge-UNESCO njengeGugu Lomhlaba futhi kufanele ukuvakashelwa.
Yini ongayibona emzileni wama-dinosaurs ase-Asturias
Ngaphandle kokuthi ezokuvakasha zesayensi zisasebenza eSpain, abantu abaningi ngokwengeziwe banesifiso sokuvakashela ...
Imininingwane nolwazi oluyisisekelo ngeSpain
Ngabe wazi konke ngeSpain? Thola imininingwane ethile mayelana naleli zwe laseYurophu njengabantu bakhona, indawo emephini, isimo sezulu noma izindawo eziyinhloko zezivakashi.
Ama-igloos engilazi weHhotela Kakslauttanen
IHotel Kakslauttanen yaseFinland iyikhaya ledolobhana elithandekayo lama-glass igloos akuvumela ukuba ubone isibhakabhaka sasebusuku usembhedeni wakho.
Amadolobha amahle kakhulu eSpain
Thola amadolobha ama-5 amahle kakhulu eSpain, afanele izindawo zawo ezihlukile. Uyabazi bonke? Thola ukuthi yimaphi amadolobha amahle kakhulu aseSpain
Amachibi kaTristaina, okubalulekile kwe-Andorra
Amachibi noma isekisi likaTristaina yiqembu lamachibi asedolobheni lase-Andorran lase-Ordino futhi cishe ngamamitha angama-2300 wokuphakama.
Phila injabulo yeSonto Elingcwele eVatican
Phila umuzwa wokuchitha iSonto Elingcwele eVatican
Yini ongayibona eGranada: izindawo ezinhlanu ongeke uziphuthe
Yini ongayibona eGranada? Thola izindawo ezi-5 ongeke uziphuthe ngesikhathi uvakashele: I-Alhambra noma iSierra Nevada ezinye zazo, kepha ngabe uyazazi zonke?
ILanzarote, isiqhingi somlilo nolwandle
ILanzarote ingabhekwa njengesiqhingi esinakho konke. Iletha ndawonye amabhishi amahle, isimo sezulu esincane, amadolobha amahle, ipaki ...
Ukuhambela eStockholm ebusika
Sihambela eStockholm ebusika ukubona ukuthi yini engavakashelwa edolobheni ngalesi sikhathi futhi sihlole umoya wayo, kuyinto engakholeki.
Izinto ongazibona eMilan
Idolobha laseMilan linezikhumbuzo ezinhle nezikhala eziningi ongazivakashela, ngakho-ke futhi lingaba yindawo enhle yezivakashi.
Imininingwane yokuvakashela izinqaba zaseLoire ezivela eParis
Joyina ukuvakasha kwezinqaba zaseLoire kusuka eParis
Amabhishi e-Naturist e-Andalusia
Thola amabhishi amahle kakhulu e-Andalusia: avakashelwa kakhulu futhi aziwa ngabathandi be-nudism.
Ama-Igloos eYurophu aphile njengama-Eskimo izinsuku ezimbalwa
Manje njengoba iSpain ibhekene negagasi lokubanda neqhwa, abaningi bethu baphupha ngokufika kwentwasahlobo futhi ...
I-West Coast yase-Ireland, uhambo olubalulekile (II)
ingxenye yesibili yohambo lwami oluya ogwini olusentshonalanga ye-Ireland. Uma usuku lokuqala ngaya emaweni aseMoher, kokulandelayo ngangihlala ngibheke enyakatho
I-West Coast yase-Ireland, uhambo olubalulekile (I)
ingxenye yokuqala yomzila engiwenze ngasogwini olusentshonalanga ye-Ireland, ugu lwe-Atlantic, ngemoto. Indawo enamathafa amahle kakhulu. I-Ireland eyiqiniso.
Izindlu ezilenga, isimangaliso saseCuenca
Thola Izindlu Ezilenga zeCuenca futhi ujabulele indawo enhle enemibono emangalisayo. Uma uzovakashela eCuenca, awukwazi ukubaphuthelwa.
Iziqhingi eziyi-10 ezihamba phambili eYurophu ukujabulela ilanga
Siyathanda ukuthola izingxenyana zomhlaba ngezikhundla lapho sibona khona izindawo ezipholile kunazo zonke. Abanye bethu basele ...
Imininingwane yokuthi ungaya kanjani e-Iceland
Imininingwane ewusizo yokuthi ungaya kanjani e-Iceland, ngendiza, nangesikebhe
ICorleone eSicily, imbeleko yamafia afuna ukuyeka ukuba munye
Thola iCorleone, idolobha elincane laseSicily ebelilokhu lihlotshaniswa namafiya ase-Italy. Ngabe kuyiqiniso okushiwo yibhayisikobho nezincwadi?
Inhliziyo Yangempela Ekhaliphile: UWilliam Wallace eStirling, eScotland
Sithola iNational Wallace Monument, umbhoshongo omuhle owakhiwe eStirling (eScotland) wokuhlonipha uWilliam Wallace.
Umzila wokuthola iRouen, idolobha lemibhoshongo eyikhulu yensimbi
INormandy yisifunda saseFrance esivame ukuheha abavakashi abanentshisekelo ngeMpi Yesibili Yomhlaba, njengoba kuyi ...
Thola amabhishi amade kakhulu eYurophu nasemhlabeni. Ingabe bakhona eSpain? Faka futhi ujabulele lamabhishi lapho uzofuna khona ukushiswa yilanga nolwandle.
ICarlsberg Brewery eseCopenhagen
Siya eCopenhagen ukuvakashela iCarlsberg Beer Factory, uhambo oluqondiswayo olwazi inqubo yalo yokukhiqiza, umlando wayo futhi, ekugcineni, ukunambitha ukunambitheka kwawo
Konke ohlale uzibuza ngakho nge-El Retiro Park
Ngamahektha angama-125 nezihlahla ezingaphezu kwezi-15.000, i-El Retiro Park iyindawo yokuthula e ...
Ukuhamba ngomzila waseYurophu othandweni nosuku lwezithandani
I-Europa yaqanjwa ngegama lendodakazi enhle yenkosi yaseFenike u-Agénor, owayengwa nguZeus futhi waguquka ...
IBelmond Royal Scotsman, isitimela sikanokusho saseScotland
Hlangana nesitimela sikanokusho saseBelmond Royal Scotsman, ihhotela lezinkanyezi ezinhlanu labantu abangama-36 kuphela
Izindlela ezinhlanu zokubaleka zokujabulela iqhwa eSpain
Umdlalo wesizini entsha ye-ski ubulindile kepha ulapha. Siphakamisa ukuthi kuphunywe eqhweni eSpain.
Indawo Yasebukhosini yase-Aranjuez nezingadi zayo ezinhle
I-Aranjuez idume ngensimu yayo yezithelo ecebile kodwa ngaphezu kwakho konke ngesigodlo sayo esihle nezingadi ezibucayi. Thola umlando weSigodlo sase-Aranjuez.
I-Algarve, ihamba emabhishi ayo amahle kakhulu
I-Algarve inamabhishi amahle ogwini lwayo. Siyakutshela ukuthi yimaphi amabhishi amahle kakhulu ongavakashela kule ndawo eseningizimu yePortugal.
IFlorence, idolobha eligcwele ubuciko
IFlorence ingelinye lamadolobha ase-Italy adume kakhulu, indawo enobuciko nomlando ezitaladini zayo. Thola ukuvakashelwa okubalulekile okufanele ukubone.
Ukuzalwa kabusha kwamanxiwa ePompeii
Kusukela yabhujiswa ngo-AD 79, iPompeii ivuse umxhwele emhlabeni jikelele. Minyaka yonke izigidi zezivakashi ziza e-Italy zizoyibona.
Izilwane Zase-Alpine: Izilwane ZaseSwitzerland
Yazi izilwane ezijwayelekile ze-Alps eSwitzerland, izilwane ezihlukahlukane kakhulu eziyikhaya lezinhlobo eziningi. Ngabe uyafuna ukubazi?
Amakhaza amakhulu: amaholide asebusika eNorway
INorway ingenye yezindawo ezijabulisa kakhulu futhi ezingakholeki ebusika, ezinemifula yayo ehlaba umxhwele, abagibeli besileti namalambu asenyakatho.
ICap d'Agde, inhlokodolobha yenudism
Ibhishi laseCap d'Adge liheha izinkulungwane zezivakashi ezifuna ukuzijwayeza ubunqunu, ingabe ufuna ukwazi indawo yazo yokuhlala, izeluleko nemisebenzi etholakalayo?
Umzila ka-Isabel La Católica eCastilla y León
Uchungechunge lube yisikhangiso esihle kakhulu sezivakashi ezindaweni eziningi. Wazalwa kanjalo-ke umzila ka-Isabel La Católica eCastilla y León.
Lapho iNorth Sea ihlangana neBaltic
Sithola iSkagen eDenmark, indawo engakholeki lapho kuhlangana khona izilwandle ezimbili futhi isibonisa indawo engajwayelekile. Uyafuna ukuyibona? Ukungena!